Dursa uummata keenya bakkayyuu dhumataa fi dararamaa jiruuf gaddi nutti dhagahame guddaa ta’uu ibsanna. Uumaan dhala nama wal qixxeessee uumuun fi dachees akka irra jiraatuuf badhaasuun kennaa Waaqaati. Biyyii, mootummaa fi siyaasni namaan tolfamanis, lammummaa waliif kennuun, daangaa sararanii mirgaa fi dirqama dhala namaa daangessuun, bu’aa kalaqa dhala namaati. Rakkoon siyaasaa Impayera Itiyophiyaakeessaas sabooti gariifdirqama qofaa kennee, kaaniif ammoo mirga qofaa qooduun, haqa-dhablummaa babal’isuun madda waraanaa fi goolamaa naannoo Gaanfa Afrikaa ta’e. Hidhamtooti siyaasaa Oromoo biyya keessaa fi baqattooti Oromoo biyya ambaa keessa jiran rakkoo hamaa keessa jiraachuun Oromoo hedduu gaddisiisaa jira.
Rakkoon siyyaasaa kun gara dhabee, lola hamaa keessa seenuun lubbuu fi qabeenya dhala namaa guyyuu gaga’aa jira. Haala kanaan gidiraan ilmaan Oromoo irra gahaa jiru ulfaatee, Oromoon qe’ee isaa irraa buqqa’ee karaatti bahee, rakkoo hamaaf saaxilamaa jira. Hidhaa fi ajjeechaan itti hammaachuun akkasumas hiyyummaan dararamee akka biyyoota halagaatti godaanu dirqame. Ilmaan Oromoo biyya isaanii keessatti hayyuu fi mootii ta’uu dandahantu rakkoo siyaasaaf jecha jireenya baqatttummaaf saaxilamee malee baqattooti yakka tokkollee hin qaban. Hawwiinbaqattoota kanaas akkuma nama kamiiyyuu kabajaan hojjetanii jiraachuu dha.
Haa ta’uuti, Oromoon mootummaa isa arihu, hidhuu fi ajjeesu malee kan isaaf dhaabbate falmu waan hin qabanneef sarbamni dhala namaa kana hin jedhamne keessaa fi alaan irratti raawwatamaa jira. Jaarraa amma keessa jirru keessatti qabaan dhala namaa bifa kanaa, nama jiruu baqattummaa keessa jiruuf mitiiti yakkamaa lubbuu namaa gaga’e irrattillee
kan gaggeeffamuu hin malle dha. Mana dhiphaa keessatti lakkoofsa dhibbootaan lakkaawaman wal irra tuulamanii
jiraachuun, dhukkuba daddarbaaf saaxilamuu irra darbee qilleensa dhabuun fayyaa isaanii gaga’amaa jiraachuun gochaa namoom-dhab ta’uun hubatamuu qaba.
Ilmaan Oromoo Saudii Arabiya keessa jiraatan mudachaa jiru ajjeechaa jumlaa kan baroottan darban Yaman keessatti mudachaa ture waliin wal fakkaata. Nama yaaduu dandahuuf baqataan keessummaa kabajaati malee yakkamaa miti, hidhaanis isaaf hin malu. Yeroo halagaan biyya keenyatti baqataa turetti uummati keenyi baqataa beela baasee, kan daare itti uffisee, waan qabu qoodeefii akka dhala isaatti keessummeessaa ture. Amma rakkoo uummata keenya biyya ambaatti mudataa jiru guddoo gaddisiisaa waan ta’eef furmaata hatattamaa barbaada:
1. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiran akka hatattamaan mana hidhaa keessaa baafaman hubachiifna. Qaamoota mirga dhala namaaf falmanii fi aangawoota mootummaa mirgi dhala namaaf quuqama qaban hundi akka rakkoo kana furuu irratti hirmaatan waamicha dhiheessina.
2. Gargaarsi hatattamaas akkahidhamtoota keenya dhaqabuuf dhiibbaa feesisu godhamu hubachiisaa, uummatni keenyi
bakka jiruu waliif birmatee sagalee waliif ta’uun, dhiibbaa feesisu karaa mootummootaa fi miti-mootummaa tolchitan dhaammanna.
3. Wabiin jireenya ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiranii gaaffii keessa waan jiruuf jaarmayaaleen idil-addunyaa kan dhala namaaf dhaabbatan akka hatattamaan dhaqabaniif magantaa dhiheessina.
4. Dhimmi baqattoota Oromoo kun akka rakkoo dhala namaatti ilaalamee karaa UNHCR hordofamee furmaata waaraa argatu dhaammanna.
5. Uummatni Oromoo gidiraa jireenyaa fi baqattummaa, hidhaa, hiraarfamuu fi ajjeechaa keessaa bahuu danda’u, yoo bilisummaa isaa goonfatee, biyya abbaa isaa irratti abbaa ta’e qofaa ta’uu hubachuun, bakka jiruu hundatti harka wal qabatee tokkummaadhaan qabsoo isaa finiinsuu qofaan akka ta’e Ajajaan Ol’aanaa ABO-WBO gad jabeessee dhaama.
Guraandhala 12, 2022